Awad Hersi oo lagu wado in shaqada laga ceyriyo | Somaliska
Awad Hersi oo lagu wado in shaqada laga ceyriyo
Awad Hersi oo ah gudoomiyaha xaafadaha ay Soomaalidu u badanyihiin ee Spånga-Tensta ayaa lagu wadaa in jagadiisa laga qaado sida uu shaaciyay telefishinka SVT. Qaar ka mid ah asxaabtiisa xisbiga Miljöpartiet (MP) ayaa la sheegay in ay doonayaan in Awad Hersi shaqada laga ceyriyo.
Awad oo telefishinka u waramay ayaa sheegay in ay jiraan hadalo socdo balse aysan ilaa hadda soo bixin cid kula tartamaysa jagada gudoomiyenimada. Isagoo intaasi ku daray in haddii xisbigu kalsooni siiyo uu shaqada sii wadayo.
Qorshaha ayaa ahaa in Awad Hersi jagada laga qaado sanadihii 2014 iyo 2015 balse ma aysan soo bixin cid kula tartamaysa jagada xiligaasi balse hadda ayay u muuqataa in uu jiro loolan hoose oo soo shaac bixi doona. Kulan uu la qaatay gudiga doorashada ee xisbiga ayuu ka gaabsaday in uu sheego waxyaabihii looga hadlay.
Dhibaatooyinka magaalooyinka waaweyn iyo fursadaha tuulooyinka
Gabar 15 sano jir Soomaali ah oo Sweden laga musaafurinayo
Waa kuma ninka Swedishka ah ee Somaliland ay u magacowday safiirka Qaaradab Yurub?